မှတ်ချက်ပေးသည့်နည်းဗျူဟာများ - Do နှင့် Don'ts | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဇူလိုင်လ 29, 2013 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 8, 2013 Douglas Karr
ငါပထမ ဦး ဆုံး blogging လုပ်တဲ့အခါမှာငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် site မှာရေးထားတဲ့ post တိုင်းအတွက်အခြားဆိုဒ်များမှာ post ၁၀ ခုကိုမှတ်ချက်တွေထပ်ထည့်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်ထင်တယ်။ ထိုအချိန်ကဘလော့ဂ်များပေါ်တွင်ပြောဆိုမှုများသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ သူတို့ကစာမျက်နှာများစွာအတွက်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ မှတ်ချက်ပေးခြင်းသည်အာဏာပိုင်များ (သင့်နေဆဲ) မှသင့်ဘလော့ဂ်ကိုမြင်တွေ့စေပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန်စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါဟာကျနော့်အမြင်ပဲ၊ ဒါပေမယ့် Facebook ကဘလော့ဂ်အများစုကိုမှတ်ချက်ပေးတာကိုသတ်ပစ်တာငါယုံတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်များနှင့်ကပ်လျက်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်မည့်အစား၊ ကျွန်ုပ်တို့ Facebook တွင်တင်ထားသောအကြောင်းအရာများကိုမျှဝေပြီးထိုတွင်စကားဝိုင်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်ပေးခြင်းစနစ်ကို Facebook သို့ပြောင်းရန်တောင်စဉ်းစားမိသော်လည်း၊ သူတို့၏လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအခြားလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုသို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပို့ဆောင်နိုင်ပါ ဥယျာဉ်ခြံရံလျက်.
ရလဒ်အနေနှင့်မှတ်ချက်ပေးခြင်းသည်ယခင်ကကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။ မှတ်ချက်များသည်ဘလော့ဂ်အများစုတွင်အနည်းငယ်ရှားပါးပြီးမှတ်ချက်ပေးသူများမှအများအားဖြင့်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းခံရသည်။ ဒါကြောင့်မေးခွန်းကိုမေးရမယ်။ငါတို့ဘလော့ဂ်မှာမှတ်ချက်ပေးတဲ့နည်းဗျူဟာတွေထည့်ထားသင့်သလား။"။
ငါသဘောမတူသို့မဟုတ်စကားပြောဆိုမှုမှထည့်သွင်းဖို့သိသိသာသာတစ်ခုခုရှိတဲ့အခါ, ငါအမြဲတမ်း ရေးသားသူရဲ့ post အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန် ပြီးတော့စကားဝိုင်းကိုကြိုးစားလှုံ့ဆော်ရန်ကျွန်ုပ်၏လူမှုကွန်ယက်များမှလူများကိုညွှန်ပြပါ။
ငါဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန်ဆန္ဒရှိသည့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာများကိုမှတ်ချက်ပေးခြင်းသည်ထိုက်တန်သောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ဆဲဖြစ်သည်။ ငါအမြဲတမ်းတုန့်ပြန်မှုမရနိုင်ပေမယ့် စကားပြောဆိုမှုမှတန်ဖိုးထည့်သွင်း နောက်ဆုံးမှာစာရေးသူထံမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိသွားတဲ့။ တစ်နည်းပြောရရင်သူတို့ကငါဘယ်သူလဲဆိုတာသိကြတယ်။
I URL များထုတ်ဝေခြင်းကိုရှောင်ပါ ငါ post အဆိုပါမှတ်ချက်များအတွင်း။ မှတ်ချက်ပေးသောအများစုသည်သင်၏အမည်၊ သင်၏ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ်သင်၏ဆိုဒ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောပရိုဖိုင်းနှင့်သင်၏အမည်ကိုပြန်ချိတ်ပေးသည်။ Comment spam တွေဟာသူတို့ရဲ့ content တွေမှာ link တွေကိုအမြဲတမ်းတွန်းအားပေးလေ့ရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ကို Akismet သို့ spammers အဖြစ်သတင်းပို့သည်၊ (Disqus တွင်) သူတို့ကို blacklist လုပ်၍ spammy မှတ်ချက်များကိုဖျက်ပစ်သည်။
တစ်နေ့ကိုဆိုဒ် ၁၀ ခုကိုကျွန်တော်မလိုက်တော့ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးနေတုန်းပဲ အပတ်တိုင်းပို့စ်အနည်းငယ်။ များသောအားဖြင့်ဒီမှတ်ချက်တွေကိုငါနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဘလော့ဂ်တွေထဲမှာထားတယ်။ သူငယ်ချင်းဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဘလော့ဂါကိုလေးစားတယ်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ၊ ၎င်းသည်ဘလော့ဂ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါအမြဲပို့စ်များကိုအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်ကြိုးစားပါ အကျွန်ုပ်ကိုအောက်မေ့တော်မူပါ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာ။
SEO ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်မှတ်ချက်များကကူညီပါသလား။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဘလော့တွင်မှတ်ချက်များသည်အကြောင်းအရာ၊ အညွှန်းနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သို့ပေါင်းထည့်သည်ကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ အကြောင်းအရာအများစုနှင့်ပါသောကျွန်ုပ်၏ပို့စ်များသည်အလွန်တော်သောတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မယုံပါ။ အခြားဘလော့ဂ်များပေါ်တွင်သင်၏မှတ်ချက်များသည်သင်၏ SEO ကိုအထောက်အကူပြုသလား။ မှတ်ချက်ပေးစနစ်အများစုကိုအသုံးမပြုပါ nofollow သို့မဟုတ်သင်ထုတ်ဝေသောလင့်ခ်များကိုပိတ်ထားပါ။ ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်ပေးသည့်ပြည်နယ်မှ SEO အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်မမျှော်လင့်ပါ။
Tags: မှတ်ချက်မှတ်ချက်များနည်းဗျူဟာများcommentcomment နည်းဗျူဟာများမှတ်ချက်များဥယျာဉ်ခြံရံလျက်
ဗီဒီယို - B2B ကြော်ငြာနှင့် BXNUMXB ဦး ဆောင်ငါးဖမ်းခြင်း
30:2013 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 40
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မှာထင်မြင်ချက်ကိုရှေ့သို့ဆွဲရန်ဆွေးနွေးရန်အတွက်နောက်ပြန်မှတ်ချက်ပေးသည့် app connector တစ်ခုဖြစ်သည်။
30:2013 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 52
WP နှင့် Facebook မှတ်ချက်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်သည့်ပလပ်အင်များရှိသည်။ ငါကိုယ်တိုင်ပဲ Facebook ကိုအမြဲတမ်းစကားပြောရတာမကြိုက်ဘူး။ ငါက Disqus ပေါ်မှာ tab တစ်ခု၊ နောက်တစ်ခု Facebook ကမှတ်ချက်တွေကို tabbed လုပ်ဖို့စဉ်းစားခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်မှာ Google+ ကဘယ်တော့ကုန်မှာလဲဆိုတာမသိသေးဘူး။
23:2013 pm တွင်အောက်တိုဘာ 5, 04
ထင်မြင်ချက်ရေးသားခြင်းနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုဖန်တီးခြင်းသည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာသို့ပြန်လာသူများအားအရှိန်မြှင့်ရန်ကူညီပေးသည်ကိုသင်တွေ့ရှိသလား။ ငါစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်။ အကြိုက်ဆုံးဘလော့ဂ်များ / အသံလွှင့်ဌာနများသည်အလွန်လူကြိုက်များကြသည်၊ ငြင်းခုံမှုများပေါ်ပေါက်လာခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်၊ သူတို့အသွားအလာများစွာရနေသဖြင့်ကြည့်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာစဉ်းစားရန်နှင့်အချိန်ကုန်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသေချာသည်။ သို့သော်အဓိကအချက်မှာအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်နှင့်မည်သည့်ပရိသတ်တွင်မဆိုစိတ် ၀ င်စားမှုကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ 🙂
23:2013 pm တွင်အောက်တိုဘာ 10, 57
ခက်ခဲတဲ့၊ @brazilianlifestyle: disqus! ငါအရင်ကထက်မှတ်ချက်များထဲမှာအများကြီးပိုပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနှင့်စကားပြောဆိုမှုကိုမြင်လေ့ရှိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ blogging ဟာပျံ့နှံ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ငါပြောတာကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်ဂူဂယ်လ် + တွင်ပိုမိုသောအကြောင်းအရာများဖြစ်ပျက်လာသည်။
24:2013 pm မှာအောက်တိုဘာ 1, 29
အကယ်၍ ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်၊ အထူးသဖြင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ ဘလော့ဂ်ရေးသားခြင်းနှင့်မှတ်ချက်များပေးခြင်းသည်ခေါင်းစဉ်နှင့်အကြောင်းအရာအပေါ်ပရိသတ်နှင့်အမှန်တကယ်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမည့်အကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ လူတွေဟာအချိတ်အဆက်တွေကိုချက်ချင်းနည်းလမ်းတွေနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်မှတ်ချက်တစ်ခုကအစားအစာကိုသာဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျး, ငါတို့ထို့နောက်တစ်နေရာရာမှာအရေးပါသောနေရာဖြစ်ခြင်းကြောင်းအခြားတစ်နေရာကိုအာရုံစူးစိုက်ဖို့လိုအပ်သေချာပါတယ်။ White-Hat SEO သည်မင်းလောင်းအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ သင့်ကိုအင်ပါယာတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်မည့်သာမန်မဟုတ်သောပြုမူမှုမရှိပါ။
24:2013 pm မှာအောက်တိုဘာ 1, 42
အဲဒီမှာမှတ်ချက်ပေးတဲ့ spam တွေဘယ်လောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အံ့သြနေတုန်းပဲ။ 🙂
24:2013 pm မှာအောက်တိုဘာ 11, 09
အကယ်၍ သင်သည်ဝေဖန်သူ၏မှတ်ချက်ပေးသူများနှင့်သူတို့၏ဇာတ်လမ်းတိုများသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်အချို့ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီး၊ သင်သည်မူရင်းပိုစတာမဟုတ်ပါကဤနေရာတွင်နှစ်ဘက်စလုံး၏ကျော်ကြားမှုဓားသည်ရှိသည်။ သင်ကပိုစတာ (သို့) ဘလော့ဂ်ဂါ၊ ဆိုက်ပိုင်ရှင်စသဖြင့်အသွားအလာကိုတည်ဆောက်ရုံတင်မကဘဲသင်ကလစ်နှိပ်ပြီးဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသင်ကိုယ်တိုင်ကို စုပေါင်း၍ ဆွဲဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ငါဒီအိုင်ဒီယာကိုအရင်းအမြစ်တစ်ခုကနေတစ်ဆင့်တွေ့ခဲ့တယ်၊ ငါဒီမနက်အထိစမ်းသပ်ဖို့လိုသေးတယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်သင်တုန့်ပြန်မှုတွေကောင်းနေရင် commenter နဲ့ blog post ကိုအလွန်လေးစားမှုရှိရင်တကယ်တော့အန္တရာယ်မကင်းပါဘူး။ လူတိုင်းအတွက်ဖျော်ရည်ကိုချိတ်ဆက်။
yahoo နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိုက်မဲသောမေးခွန်းများကိုဖြေကြားခြင်းနှင့်နောက်ကျောလင့်ခ်များအတွက်လင့်ခ်များကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ငရဲပြည်ကိုသေချာစေသည်။ ဘလော့ဂ်လုပ်လေလေ၊ စာရေးရတာပိုလွယ်ကူလေလေပိုပြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုနည်းလေလေဖြစ်တယ်။ ငါယခုမှစ။ ဆွေးနွေးမှုများတည်ဆောက်ခြင်းစတင်သွားမယ်! 🙂
24:2013 pm မှာအောက်တိုဘာ 11, 44
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဒီနေ့ခေတ်ငါတစ်ယောက်ယောက်ကငါတို့ရဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုဝေမျှခြင်းအားဖြင့်အများကြီးအသိပေးတာပဲ။ ငါတို့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးတဲ့အခါမှာဒါဟာအမြင့်ဆုံးချီးကျူးစရာပါပဲ။ စကားစမြည်ပြောရန်အရောင်များကိုပေးသည့်မှတ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ကြပြီး“ ကြီးသောဆောင်းပါး” သည်ကျွန်ုပ်အတွက်များစွာအကျိုးမပေးသည့်မှတ်စုတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ 🙂
24:2013 pm မှာအောက်တိုဘာ 11, 49
ဒေါက်ဂလပ်စ်သင်လုံးဝမှန်ကန်သည်၊ ဆောင်းပါးများကိုမျှဝေခြင်းသည်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သူကပြောသည်၊ အကယ်၍ သင်နှင့်အဆင်ပြေပါကသင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်များအတွက်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်။ သင်ချက်ချင်းဖြေဆိုရန်အခိုင်အမာပြောသောကြောင့်သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုအားစိုက်ထုတ်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်မှာထင်ရှားသည်။
Customer Care နံပါတ်များ
25:2014 pm မှာနိုဝင်ဘာ 3, 42
27:2016 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 2, 30
ငါ Facebook ကိုအမြဲတမ်းစကားပြောရတာမကြိုက်ဘူး။ ငါက Disqus ပေါ်မှာ tab တစ်ခု၊ နောက်တစ်ခု Facebook ကိုမှတ်ချက်တွေထည့်ပြီးပြီဆိုတာစဉ်းစားခဲ့ဖူးတယ်။ နောက်မှ Google+ ကဘယ်တော့ကုန်မှာလဲဆိုတာမသိသေးပါဘူး။